यसकारण वन्यो इतिहासकै ठुलो मन्त्रीपरिषद Globe Nepal News Portal
नया मन्त्रीपरिषद बनेपछि सामाजिक सञ्जालमा एक जनाले सोधेका छन–के प्रधानमन्त्रीलाइ सवै मन्त्रीहरुको नाम र थर त थाह छ ? इतिहासकै जम्वो मन्त्री परिषद बनेपछि जन–आक्रोश र ब्यग्य दुवैको समिश्रण हो यो । सोमवार मध्यान्ह शीतलनिवासमा ३ जना र सिहदरवारमा एक जनाले राप्रपा प्रजातान्त्रिकको तर्फबाट मन्त्रिपरिषदमा सहभागीता जनाएपछि मन्त्रीपरिषद विशाल आकारको भएको हो । नया मन्त्री सहित मन्त्रीपरिषद बनेपछि अब यो ५४ सदस्यीय भएको छ ।
२०५२सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुदा शेरवहादुर देउवाले यसैगरि ४८जनाको जम्वो मन्त्रीपरिषद हाकेका थिए । हुने नहुने सवै खालका काम र कर्तुत त्यतिवेला भएका थिए । गणतन्त्र आएपछि सानो र चुस्त आकारको सरकार बनाउछु भनेर प्रतिवद्धता जनाएर प्रधानमन्त्री भएका डा बाबुराम भटटराइले ४९ जनाको मन्त्रीपरिषद बनाएपछि बल्ल देउवाको निधारमा लागेको कालो दाग छोपिएको थियो । तर,यसपटक उनले ५४ जनाको जुन मन्त्रीपरिषद बनाए,सम्भवत इतिहासमा यसलाइ कसैले पनि जित्न सक्ने छैन । किनभने नया संविधानमा ठुलो र भद्धा आकारको मन्त्रीपरिषद बनाउने छुट नै दिइएको छैन ।
प्रशासन सुधार आयोगले सरकारलाइ वेला बेलामा दिएको रिपोर्टमा १८ देखि २१ जनाको मात्र मन्त्रीपरिषद बनाउन सुझाव दिएको छ । तर,यो सिलिङलाइ कुनै पनि सरकार प्रमुले मानेका छैनन । यसपटक त यसको घोर उल्लंघन नै भएको छ ।
देउवा प्रधानमन्त्रीमा चुनिदा झण्डैं दुइ तिहाइ मत पाएका थिए । उनले ३८८ मत पाएर प्रधानमन्त्रीमा चुनिएका हुन । तर कांग्रेस र अन्य केही साना दलका कतिपय सांसद मतदानमा आएनन । यदि उनीहरु सवै आएको भए ३सय ९२वा सो भन्दा माथि पुग्ने थियो आंकडा । सरकारलाइ सवैभन्दा भरपर्दो साथ नेकपा माओवादी केन्द्रले दिएको छ । उसका ८४जना सांसदको साथ देउवालाइ छ । कांग्रेस आफनै २०७ मत छ । अनि,सरकारमा नगए पनि मधेशी दलको मत पनि सरकारलाइ नै छ अर्थात,सरकार बहुमत गुमाउने अवस्थामा छैन । यदि नेकपा माओवादी केन्द्रले साथ दिइरहयो भने देउवा सरकारलाइ हावाले पनि हल्लाउन सक्दैन ।
न संसदमा बहुमत गुमाउने अवस्था छ न सरकार विस्तार गर्ने माहौल नै छ । अथवा राप्रपा प्रजातान्त्रिकलाइ सरकारमा लैजानु पर्ने कुनै वाध्यता पनि छैन । तैपनि देउवाले किन मन्त्रीपरिषद विस्तार गरे त ?अनौठो त के भने मन्त्रीपरिषद यति जम्वो हुदा पनि प्रधानमन्त्री देउवासंग अझै एउटा मन्त्रालय अझै रिक्त छ ।
निर्वाचन आचार संहिता यतिवेला लागेको छ । २ नम्वर प्रदेशको निर्वाचन संघारमा नै आइसकेकोले सवैको ध्यान त्यतै केन्द्रित छ । स्वयम कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवासमेत भदँै २७ गते देखि आमसभामा केन्द्रित हुने भनेर कांग्रेसले सुचना सार्वजनिक गरिसकेको छ । पहिलो चरणको चुनावको बेला प्रधानन्यायाधिश र आइजीपी काण्ड चलेकोले निकै घाटा लाग्यो भन्ने कांग्रेसको मुल्यांकन थियो । तर तेस्रो चरणको चुनावमा राम्रो नतिजा आउछ भनेर कांग्रेसले आफुले आफनै पिठ थपथपाइरहेको बेलामा सरकार यति भद्धा आकारको भएको छ कि यसले कांग्रेसको बदनामी गर्नेछ ।
चुनावको मुख यति कुराको हेक्का के प्रधानमन्त्री देउवाले गरेका छैनन ? यदि छन भने उनले यसको पर्वाह नगरि किन मन्त्रीपरिषद यति ठुलो बनाए त ?
राप्रपा प्रजातान्त्रिकको तर्फबाट हाल मन्त्री भएका ३ जनामध्ये तिनै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन । दिपक बोहरा पञ्चायत कालमै पनि मन्त्री भएका मानिस हुन।सुनील थापा पुर्वप्रधानमन्त्री सुर्यवहादुर थापाको छोरा हुन भने विक्रम पाण्डे अघिल्लो सरकारमा पनि मन्त्री थिए ।
प्रधानमन्त्री उनको दल र उनलाइ साथ दिने कुनै पनि दलले मन्त्रीपरिषद यति ठुलो वनाउने कुराको चित्त वुझदो जवाफ दिन सक्ने छैनन ।
तर,अर्को कुनाबाट एकाथरि मानिसहरु चाहि के भन्दैछन भने प्रधानमन्त्री देउवाले भारत भ्रमणको बेलामा पुन संविधान संशोधन गर्ने कुरा गरेकोले सरकारमा संख्या थप गर्नु भन्दा पनि संविधान संशोधनको लागि दुइ तिहाइ पुरयाउने कसरतको रुपमा यसलाइ वुझिरहेका छन । के यस्तै होला त ?